Hielscher - हामी Ultrasonics निर्माण! - हिल्सचर अल्ट्रासाउन्ड टेक्नोलोजी
Hielscher – हामी अल्ट्रासोनिक्स निर्माण गर्छौं!
तपाईंको प्रशोधनको लागि उत्तम गुणस्तर र सेवा प्रदान गर्न, हामी हेलसेस्टर अल्ट्रासोनिक्समा उत्पादनको हाम्रो दायरा निर्माण गर्छौं। विचार, विकास र मशीनिंग, विधान र परीक्षणको लागि सीएडी रेखाचित्रबाट, हामी उत्कृष्ट सन्तुष्टि लिन्छौं र यो राम्रो गुणमा आउँदा विवरणको लागि आँखा छ। हामी अल्ट्रासोनिक निर्माताको रूपमा हामी थप विकल्पहरू र अनुकूलन प्रस्ताव गर्न सक्छौं ताकि तपाईं आफ्नो परियोजनाको लागि आवश्यक अल्ट्रासोनिक उपकरण प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
आज हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् नि: शुल्क परामर्श र उद्धरणका लागि
जब तपाइँ हामीलाई हामीलाई प्रशोधन आवश्यकताहरू (भोल्युम, उद्देश्य) प्रदान गर्नुहुन्छ हामी तपाईंलाई अत्याधिक उपयुक्त कन्फिगरेसन सिफारिस गर्न प्रसन्न हुनेछौं जुन अल्ट्रासोनिक प्रसोधनमा हाम्रो विस्तृत विशेषज्ञताको आधारमा हो। हाम्रो सफलता कडा बिक्रीको रणनीति र धेरै अनुयायी कलहरू निर्माण गरिएको छैन। हामी सरलसँग यसलाई सम्पर्क गर्न चाहन्छौँ हामीलाई सम्पर्क गर्न वा थप छलफल गर्न चाहनुहुन्छ।
हामी किन्नुहोस् गुणस्तर – त्यसो भए तपाई
हामी महान हेरचाह संग हाम्रो सामाग्री र आपूर्ति को स्रोत। जस्तै हामी निर्माताहरू पनि छन्, हामी जान्दछौं कि गुणस्तर सस्तो हुँदैन। हामी हाम्रा आपूर्तिकर्ताहरू उनीहरूको गुणस्तर र क्षमतामा आधारित छान् र तिनीहरूसँग लामो समयको सम्बन्ध निर्माण गर्दछौं।
हाम्रो प्राविधिक केन्द्र प्रयोग गर्नुहोस्
बीपरमा परीक्षण sonication को लागि वा धेरै ग्यालन / मिनेट इनलाइन चलाउन को लागि, हामीसँग हाम्रो प्रविधि केन्द्र छ र पायलट संयंत्र सुविधा छ जसलाई प्रवाह कक्ष संग हस्तनिर्मित homogenizers र उच्च शक्ति अल्ट्रासोनिक्स संग सुसज्जित छ। हाम्रो प्रक्रिया टेक्नीसियनहरूले तपाईंको साथ काम गर्ने उत्तम कार्य मापदण्डहरू फेला पार्नका लागि तपाईंको कार्यकार्यलाई कार्य गर्नेछ। थप पढ्नुहोस्…
अल्ट्रासोनिक प्रक्रिया प्रशिक्षण
हामी शोधकर्ताहरु, प्रविधिहरु, अपरेटरहरु र रखरखाव चालक दलहरुको लागि प्रशिक्षण सेवा प्रदान गर्दछौं। यो हाम्रो प्राविधिक केन्द्र वा तपाईंको परिसरमा गर्न सकिन्छ।
हामी अल्ट्रासोनिक्स स्थापना गर्दछौं
तपाईंको साइटमा चिकनी स्थापना र sonication प्रणाली को स्टार्टअप सुनिश्चित गर्न, हाम्रो समर्पित स्थापना तकनीशियनहरू छन्। तारिखलाई अल्ट्रासोनिक प्रणालीबाट तपाइँलाई PLC नियन्त्रणमा सहयोग गर्न तपाईंको शक्तिमा – हामीले यो गरौं।
अल्ट्रासोनिक टोल प्रोसेसिंग
हामी अल्ट्रासोनिक्स मा पेशेवर हो। हामी जर्मनीमा हाम्रो पाइलट संयन्त्र सुविधामा तपाईंको सामाग्री प्रशोधन गर्न सक्छौं। हाम्रो पास अल्ट्रासोनिक पावर, प्रवाह सेल रिएक्टरहरू, पंपहरू, ताप-एक्सचेन्जहरू र विश्लेषक उपकरणहरू हुन्। उद्धरणको लागि हामीलाई सोध्नुहोस्।
Hielscher Ultrasonics बारेमा
पुस्तक तपाईंको आवास
ड्रिलिंग मूड र प्याकर फ्लुइड को लागि अल्ट्रासोनिक मिक्सर
क्यारियर हेलसेस्टर अल्ट्रासोनिक्स